Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-10 Disemba 2019	• 8 Comments
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-9 Disemba 2019	• 13 Comments
Kubantwana abakwizikolo zaseprayimari nakwishumi elivisayo, kufuneka kubekho uxinzelelo olukhulu ngoku ekubeni ootitshala bangabaxeleli nje ukuba basenokukhetha isini sabo, kodwa ukuba imeko yemozulu nayo ibangela uxinzelelo lwamaqela. Ukuba iphantse iphambuke indlela yokuziphatha ukuba ibe yinto eqhelekileyo kubantu abathandanayo, ke kwiminyaka yakutshanje kuye […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-6 Disemba 2019	• 8 Comments
Kwiphondo lase China iSinkiang kuhlala iqela labemi elibizwa ngokuba yi-Uyghurs. Ngokwesiqhelo bangamaSilamsi ngokwendalo kwaye ilizwe laseTshayina lingathanda ukukubona ngokwahlukileyo oku. Imifanekiso esiyibonayo yeyabantu abaphikisayo kunye neqela labanqolobi elineefoto kunye neevidiyo ezifanayo nezo ze-IS. Iya []
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-4 Disemba 2019	• 14 Comments
I-Intanethi isizisele ulwazi oluninzi kangangokuba luye lwatshintsha ukusuka kumthombo wolwazi ukuba lungeva kakuhle. Njengoko iTV iguqulwe ukusuka kulwazi ukuya kwi-wayine nakwi-chip ukuzonwabisa, kugqitywe nguJohn de Mol & co; Umzekelo, kule mihla, amajelo eendaba ezentlalo ikakhulu malunga nokuonwabisa kunye neevidiyo ezihlekisayo kunye nokubukela okwenziwa ngabahlobo bakho kwi-Instagram. Ukongeza […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-3 Disemba 2019	• 9 Comments
Urhulumente wehlabathi lobugcisa sisisombululo kuphela sokusindisa iplanethi yethu kwintshabalalo ngenxa yentlekele yemozulu eza kuthi. Xa iinkwenkwezi ze-movie zikhalisa i-alarm yentsimbi, sele uqinisekile ukuba isiqingatha sabemi behlabathi ukuba into eneneni kufuneka yenziwe, kuba ukujonga okuhle kunye nokudumisa abalandeli kusisiseko. [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-1 Disemba 2019	• 8 Comments
URutger Bregman, ngoku umbhali owaziwayo wehlabathi, ngenxa yentetho yakhe kwiForum yezoQoqo yeHlabathi, wenza iinkcazo ezithile kudliwanondlebe olu. Ngokwesiqhelo xa umntu efumana ingqalelo engaka kwimithombo yeendaba, sisebenzisana nomntu otyhila i-ajenda ngasemva kwemaski yomgxeki onovelwano. Siyabona ukuba eGreyta Thunberg, siyayibona le nto […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Novemba 2019	• 10 Comments
Phantse iSinterklaas, itheko labantwana bokwenyani kunye netheko eligcwele ngokumangalisayo. Ezi zinto zintle kangaka zipakishwe kakuhle kwaye zihlala zibiza imali eninzi. Kwimeko yabantwana bethu, singathanda ukuyihlawulela, kodwa izinto eziothusayo zeSinterklaas zikwindawo entle efakwe kwibhasikithi entle kwaye iyasibiza […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Novemba 2019	• 10 Comments
E-China, inkqubo yenqaku lentlalontle, ebizwa ngokuba yi-Sesame Credit, iyasebenza, ekuziphatheni kwayo yonke into yabemi ibonakaliswa ngokudibanisa okanye ukuya kumanqaku. Ngenani elingezantsi lamanqaku, umzekelo, awusavunyelwa kuloliwe okanye kwinqwelomoya okanye uphela kulayini ulandelwa iinkqubo zokwenza isicelo. Inkqubo yenqaku elinjalo iya kumiliselwa kwi-EU ngaphakathi ezimbalwa […]
I-AIVD ithintele olunye uhlaselo lobugrogrisi, yatsho i-AIVD kunye namajelo eendaba athengisa lo mboniso
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Novemba 2019	• 10 Comments
Ngapha koko, akukho nto ingako ifunekayo ekuthethwa ngayo malunga nesihloko esishwankathela. I-AIVD ithintele olunye uhlaselo, i-AIVD ithi kwaye abeendaba bathengisa umboniso. Iindaba ze-NOS eneneni azithathelwanga kancinane kumashumi eminyaka, kodwa isitayile esijongekayo esibizayo kunye nesona sihle ngakumbi […]
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.604.320